HomeWararka MaantaIbra Aiming For revenge: “Ibra Wuxuu Rabaa In Uu Ka Aarsado Guardiola”
Waraysi ay Idaacadda Marca la yeelatay wakiilka Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola ayaa waxa uu ku sheegay in laacibka Zlatan Ibrahimovic uu qorshaynayo sidii uu uga aargoosan lahaa Pep Guardiola isla markaana uu heshiis la saxeexan doono Real Madrid.
S. Saamayn intee le’eg ayaad ku leedahay xirfadda Ibrahimovic?
J. Kaliya waxa ka muhiimsanaa Pavel Nedved, qiimo badan ayaanu ii leeyahay shakhsi ahaan, waxaanan la shaqeeyaa oo kaliya dadka leh wadaaga damaca iyo doonista shaqada. Sannado badan ayaan ku faraxsanaa.
S. Ibrahimovic wuxuu u soo ciyaaray kooxo badan, laakiin Real Madrid uma uu ciyaarin…
J. Real Madrid waa koox siyaasadeed e maaha koox caadi ah. Ma fahmi karo sida ay u shaqayso, laakiin waxa ay noqon lahayd kooxda ku wanaagsan Ibrahimovic in uu u ciyaaro sababtoo ah waa ciyaartoy weyn, Samir badan, wax layaab leh ayaanu samayn karaa wakhti kasta. Ma garan karayo in ay tahay khaladkayga in aanu ku biirin kooxdaas.
Q. Ma u malaynaysaa in uu qoomamaynayo in aanu ku biirin Real Madrid?
J. Ilamaha aha in uu qoomamaynayo. Zlatan wuu doonayay in uu u ciyaaro Real markii uu ka tegay Barca. Waxay ahayd mid mabdi’I ah, oo ah sida kaliya ee uu kaga aargoosan karayay Guardiola.
S. Laakiin ma kula tahay in uu si uun ugu biiri lahaa Real Madrid?
J. Ancelotti Ayaa doonayay, aniga ayaana Madrid u tegay si aanu shir uga yeelano, laakiin Jose Angel Sanches ayaa telefoon u diray madaxweynaha PSG Nasser Al Khelifi oo diiday arrinta.
S. Maxaa dhex maray Ibrahimovic iyo Barcelona?
J. Kaliya “Faylasuufarka” Guardiola ayaa og. Aniga shakhsiyan, hab-dhaqankiisu waa ila xumaa oo qalafsanaa laakiin waa tababare weyn. Zlatan sannad dhan ayuu daba socday. Ugu yaraan toban jeer ayuu telefoon kula hadlay, waxaanu u sheegay waxa ay Barcelona ka doonayso iyo in uu caawiyoba. Laakiin mar kaliya ayay wax dhaceen, waxaanu joojiyey hadalkiiba.
S. Ma waxay isku dhaceen Leo Messi?
J. Ma ogi, laakiin waxa aan xasuustaa in Txiki Begiristain (Agaasimihii Barcelona ee la eryey) uu bidhii November ila soo hadlay, wuxuuna ii sheegay in uu doonayo in uu ila hadlo. Wuxuu igu yidhi: “Eeg, Messi wuu dhibaataysan yahay, ma faraxsana. Goolal badan ma dhalinayo, markaa waa in uu Zlatan caawiyo”. Ibra ayaa isna si fiican arrintaas u qaatay, naguna waafaqay. Bil kaddib ayuu Txiki ii sheegay in Guardiola uu beddelayo qaab ciyaareedka oo ka duwanaan doona sidii lagu heshiiyey. Dhibaato ma leh ayaan ku idhi. Txiki ayaa haddana mar kale ii sheegay in ay mushkiladi jirto, waxaanu igu yidhi: “Messi waa dhibaataysan yahay, waxaanu u cawday Guardiola oo waxa uu rabaa in uu dhexda ka ciyaaro, Guardiola-na kuma ciyaari karo laba weeraryahan.” Pep mar dambe lama uu hadal Zlatan, xattaa markii uu dhaawacmay.
S. Muxuu markaa Zlatan sameeyey?
J. Wuxuu muujiyey xirfadlenimadiisa si kabadan sidii hore, waxaanu isku dayay in uu Real Madrid heshiis la saxeexo, laakiin iskuma ay waafaqin isaga iyo reer Bernabeu. Waxay ila tahay in Ibra uu xirfaddiisa ku dhamaysan doono PSG.
Watch Aberdeen 2-1 Rangers – Goals and highlights
Ancelotti Iyo Habeenkii Madoobaa Ee Juventus